यौन र जीवन – Page3– धादिङ जिल्लाको पहिलो अनलाइन खबर पत्रिका
-डाक्टर राजेन्द्र भद्रा मेरी श्रीमती लिंगभन्दा पनि औंलाबाट यौनसन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ भन्छिन् । नियमित औंलामार्फत यौन क्रियाकलाप गर्दा कुनै नकारात्मक असर पर्छ कि पर्दैन ? ७२८९ महिलाले कसरी यौनसन्तुष्टि प्राप्त गर्छन् ? मानव यौन प्रतिक्रिया चक्र चारवटा चरण १. एक्साइटमेन्ट फेज, २. प्लाटो फेज ३. अर्गाज्म फेज र ४. रिजोलुसन..
एजेन्सी: विश्‍व बजारमा प्रविधिको प्रयोग र पहुँच चस्मा र घडी हुँदै मोबाइलसम्म पुगिसकेको छ। विश्‍वभरका मानिसहरु स्मार्ट वाच, स्मार्ट ग्लास र स्मार्टफोनको प्रयोगमा व्यस्त भइरहेका छन्। उनीहरु आफ्नो दैनिकी स्मार्टलाई लिएर चलाइरहेका छन्। यही दौडमा अर्को नयाँ नाम थपिएको छ स्मार्ट कन्डम। विश्‍व बजारमा स्मार्ट कन्डम बिक्रिका..
पुुरुष गर्भवती भएर हिँडेपछि…
जापानमा गर्भवती महिलाहरुका लागि अनौठो जागरुकता अभियान संचालन भएको छ । उक्त अभियान तीन जना पुरुष गभर्नरले सुरु गरेका छन् जसले आम मानिसको सोचमा परिवर्तन ल्याउन ठूलो सहयोग हुने छ । जापानको दक्षिण पश्चिम प्रान्तका तीन पुरुष गभर्नरहरु गर्भवती भएर घुमिरहेका छन् । ती तीन पुरुषहरुले ७ किलोको ज्याकेट लगाएका छन् जसले ठ्याक्कै गर्भवती महिलाको..
बाजी हारेपछि टेनिस सून्दरी समर्थकसँग डेटिङमा
बिबिसी हिन्दीका अनुसार युएस सुपर बाउलको एटलान्टा फाल्कन र इंग्ल्याण्ड प्याट्रियट्सविचको प्रतिष्पर्धामा बुचार्डले ट्विट गरेर फाल्कनले खेल जित्ने दावी गरिन्। उनले जुन समयमा ट्विट गरेकि थिइन् त्यो बेला फाल्कन २१—० ले अगाडि थियो। त्यसैले उनले ट्विट गरेर यो भविष्यवाणी गरेकी थिइन्। त्यहीबेला उनको एक प्रशंसक जोन जोहर्कले ट्विट गरेर..
महिलाले जन्माइन् पाठो, पाठोको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल
हामीले बेला बेलामा मानिसले विभिन्न जनावरजस्तै बच्चा जन्माएका घटना सुनिरहेका हुन्छौं । त्यस्ता घटनाले हामी अचम्ममा पनि पार्ने गर्दछ । फेरी अचम्मको घटना भएको छ, नाइजेरियामा । नाइजेरियामा एउटी महिलाले यस्तो बच्चा जन्माएकी छन्, त्यो बच्चा बाख्राको पाठो भन्दा केही फरक छैन । उनले जन्माएको बच्चाको रुप पूरै पाठोसँग मेल खान्छ । अझै अर्काे..
दौडेर २५ किलोमिटर पार गरी बिहे
भारत । भारतको महाराष्ट्रस्थित कोल्हापुरमा हालै यस्तै अचम्मको बिहे भएको छ । त्यो बिहे कम, दौड बढी जस्तो लाग्थ्यो । बिहे सम्पन्न भइसक्दासम्म दुलाहा-दुलही र जन्तीले २५ किलोमिटर त दौडिएरै पार गरेछन् । कलोशी गाउँमा जब बिहान जन्ती निस्कियो तब सबै अचम्ममा परे । किनकि जन्तीहरु शुटबुटमा हैन जाँगे र टिसर्टमा थिए । जन्तीको त के कुरा बेहुला-बेहुलीले..
कुनै पनि देश विकास हुनलाई त्यहाँको सडक विकास हुनु एकदमै जरुरी हुन्छ। जुन देशमा सडकको विकास र विस्तार जुन गतिले भएको हुन्छ त्यहाँको विकास निर्माण पनि त्यही गतिमा अगाडि बढेको हुन्छ। विकासको पूर्वाधारमा मेरुदण्ड मानिने सडक अहिले विश्‍वभर लोभलाग्दो तरिकाले बनिरहेको छ। तर केही यस्ता देश छन् जहाँ सडकमा यात्रा गर्न निक्‍कै..
यौन सम्बन्ध पुरुष र महिलाबीचको प्राकृतिक आकर्षणको मुख्य कारण हो । तर यौन सम्बन्ध राख्दा महिला र पुरुषको मनमा कस्तो भाव आउँछ भन्ने विषयमा सबैलाई कौतुहलता हुन्छ । यस विषयमा धेरै अध्यन भएका छन् भने लेख रचना समेत लेखिएका छन् । पछिल्लो पटक गरिएको एक शोधले महिलाले ओच्छ्यानमा के चाहन्छन् भन्ने विषयमा नयाँ तथ्य बाहिर ल्याएको छ । यौन विज्ञको..
रोड टु मोडलको अडिसन उपत्यका बाहिर पनि हुने
काठमाडौं ÷ सौन्दर्य प्रतियोगीताहरुको भिडमा एक फरक सोच र उद्देश्यका साथ युवायुवतिको प्रतिभा उजागर गर्नका लागि ‘रोड टु मोडल’ २०१७ हुने भएको छ । यो प्रतियोगिता मोडलिङ क्षेत्रमा नै फरक हुने आयोजक संस्था दावि छ । सुत्र मोडलिङ एण्ड आर्ट क्रियशनको आयोजनामा हुने यस प्रतियोगीताका विजेताले नेपलाको प्रतिनिधित्व गर्दै फिलिपिन्स जाने पाउने छन् ।..
हेलिकोप्टरसँग अम्बिकाको विवाह
काठमाडौं । भारतको मध्यप्रदेशस्थित श्योपुर जिल्लामा दुई कुकुरको हिन्दु परम्पराअनुसार विवाह गराइएको छ । एक निःसन्तान एकल महिला शारदा जोशीले आफ्नो घरमा पालेका दुईवटा कुकुरबीच धुमधामसँग विवाह गरिदिएकी हुन् । उनले ती कुकुरलाई आफ्नो बच्चाजस्तै माया गरेर पाल्दै आएकी थिइन् । भाले कुकुरको नाम हेलिकोप्टर र पोथी कुकुरको नाम अम्बिका हो..
भर्खर क, ख लेख्न सिक्दै छिन् जुनु गौतम
काठमाण्डौ । मैले क लेख्न जाने भन्दै .झापाकी जुनु गौतम नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा क ख ग घ सिक्दै छिन ।साहित्यकार झमक घिमिरेको आत्मपरक जीवनी जीवन काँडा की फुलमा आधारित नेपाली कथानक चलचित्र जीवन काँडा की फुलमा समाबेश उक्त गीतबाट गायीका जुनु गौतम नेपाली सांगीतीक क्षेत्रमा प्रबेश गरेकी छिन । प्रकाश शिवाकोटीको शब्द संगीतमा सो गीतमा जुनुले..
मुरारिले कसलाई दिए झ्याम की झ्याम
लामो समय देखी संगीतमा आबद्द हुँदै आएका र संगीत लाई अत्यन्तै मन पराउने गायक/ संगीतकार अनि गितकार हुन मुरारी भट्टराई । अमेरिकाको क्यालीफोर्नियामा बस्दै आएका यिनै मुरारी भट्टराईले संगीतकार बिकाश चौधरीको एकल संगीतमा ‘अनामिका’ नामक पहिलो एल्बम निकाली सकेर पछिल्लो समय आफ्नो नया एल्बम निम्तो बजारमा ल्याएर आएका छन । निम्तो’मा ५ ओटा गीत..
यौनका बारेमा शिक्षा दिनका लागि विश्वविद्यालय
पोर्न अर्थात् यौनका बारेमा शिक्षा दिनका लागि भन्दै संसारका सयौं विद्यालय तथा कलेजहरुले यस सम्बन्धि पाठ्यक्रम तयार पारी पठनपाठन गराउँदै आएका छन् । तर इटालीमा भने सम्पूर्ण पढाई नै यौनका बारेमा हुने विश्वविद्यालय नै स्थापना गरिएको छ । इटालीका पोर्नस्टार रोको सिपफ्रेदीले स्थापना गरेको युनिभर्सिटी अफ पोर्नमा केवल यौनका बिषयमा मात्रै..
बिहान उठ्ना साथ यि ५ काम कहिल्यै नगर्नु जस्लाई अशुभ मानिन्छ
काठमाडौं । मासिसहरुले बिहानैको राम्रो साइत परे दिनभर राम्रो हुने विश्वास गर्ने गरिन्छ । त्यसैले बिहानको साइतले उक्त दिनको नजिता आउने विश्वास गरिन्छ त्यसैले धेरैले विहानको सयमलाई जति सक्दो शुभ बनाउने प्रयास गर्ने गर्दछन । यहाँ पनि हामी तपाइलाई बिहान उड्ने बित्तिकै गर्न नहुने अशुभ कामको बारेमा छोटो जानकारी दिदै छौ । ती काम गर्दा के..
‘कण्डम नलगाइ यौन सम्पर्क गर्न महिलाहरु इच्छुक’
एजेन्सी। सुरक्षित यौन सम्पर्क र गर्भ निरोधका लागि कण्डम प्रयोग गरिने भएपनि महिलाहरुले भने वाध्यतावश मात्र कण्डम लगाउने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ। अध्ययनका अनुसार महिलाहरुले कण्डोम लगाएर यौन सम्पर्क गर्न इच्छा नदेखाउने गरेको देखिएको छ। अध्ययनका लागि गरिएको सर्वेमा महिलाहरुको यस्तो अनिच्छा देखिएको हो। सर्वेमा धेरैजसो..